I-China Health kunye ne-oyile encinci yeoyile yokucoceka kwesinyithi se-skillet Ukwenziwa kunye neFektri | ISANXIA
Impilo kunye nomsi omncinci weoyile ukucoceka kwesinyithi
Ingcaciso:60260 * 46mm Φ280 * 50mm Φ300 * 50mm
ubunzima:Malunga ne-1.1kg ukuya kwi-1.4kg ngokweenkcukacha
Uhlobo lwembiza:Izinto zokubamba, ukucaciswa kwembiza, umlomo weoyile, isimbo sokubonakala singenziwa ngokwezifiso
Ipani yokutshiza eyenziwe ngentsimbi ecocekileyo ilula kwaye ibhityile, kwaye inokusetyenzwa ngesandla esinye. Ngaba i-fry steak, amaphiko enkukhu othosiweyo, ukuhambisa ubushushu ngokukhawuleza, ukutya okumnandi okumnandi.
Nangona imbiza ikhaphukhaphu kwaye ibhityile, uyilo lobungakanani bengxenye nganye lubalulekile, olulunge kakhulu ekuqhubeni ubushushu. Xa upheka ukutya, uyakufumanisa ukuba ukufudumeza kuyakhawuleza kwaye umsi mncinci kakhulu.
Umphezulu wembiza ukhululekile kwityhefu yemichiza, elungileyo kakhulu empilweni. Ihlala isetyenziswa. Umphezulu wembiza uya kufunxa igrisi rhoqo, kwaye kuya kuba nzima ngakumbi ukunamathela embizeni xa upheka.
Itekhnoloji eyahlukileyo yokuthambisa isinyithi yamkelwe ukuphucula ubulukhuni kunye nokuxinana kwembiza. Amandla okuphepha umhlwa kumpheki ayaphuculwa. Ukuba igcinwa nje ngokusetyenziswa yonke imihla, umhlwa unokuthintelwa. Obu yitekhnoloji esondeleyo, enokuthintela iingxaki ezininzi ekusetyenzisweni kosapho.
Iinkcukacha zezinto zokupheka
Umzimba webhodlo wenziwe kukujikeleza okrelekrele, okunokuyila ubukhulu obuchanekileyo kwaye ngokukodwa ukujiya ezantsi, okunokomeleza isiphumo sokuhambisa ubushushu emzimbeni wembiza, kwaye yenze imbiza yomelele kwaye yomelele. Isibambo senziwe ngomthi, sinesiphumo esihle sokulwa nesikali. Ingashukunyiswa ngesandla esinye kwaye isebenze kakuhle ngexesha lokupheka.
Le pani yokuqhotsa yentsimbi engasindi inoyilo lwembonakalo. Ngokweemfuno zakho, ungenza ngokusesikweni izinto eziphathekayo, yongeza iindlebe pan kunye nemilomo yeoli. Ukongeza, umbala wodonga ongaphandle unokuchazwa kwakhona. Itekhnoloji yombala yeSanxia inokuhlangabezana neemfuno zakho zombala wemveliso, imigangatho engqongqo yefektri kaSanxia inokuqinisekisa umgangatho weemveliso. Awudingi ukuba nexhala malunga neenkcukacha ezibonakalayo. Siza kuzijonga ngononophelo.
Egqithileyo Isiciko sepani sokucoca isinyithi sinokusetyenziswa njengepani yokufryisha
Okulandelayo: Ukucoceka okuphezulu kwembiza yentsimbi enobunzima bokukhanya kunye nokuqhutywa kobushushu obufanayo
04 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
I-Iron Skillet efanelekileyo
Ukucoceka kwe-Iron Skillet
Ivenkile enesinyithi i-Skillet
ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets
i-Cast yentsimbi enqabileyo
I-Polar Iron yentsimbi engenanto
Isikhuseli esinye esingenamikhono
I-ron Non Stick Skillet
Isinyithi se Iron Iron
Isinyithi esinezinto ezingenantambo
I-enamel udonga lwangaphakathi lwesiphatho sokutshiza ipani i ...
I-enamel udonga lwangaphakathi lwesiphatho esinye se-skillet pan ...
Ukucoceka okuphezulu kwembiza yesinyithi enobunzima bokukhanya kunye ne-unif ...
i-Cast yentsimbi enqabileyo, Isinyithi se Iron Iron, I-Iron Iron Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, uNamel Skillet, xtreme Iron Skillet,